‘एइ! यावा के भो भन्न?’ आमोसले सोध्थ्यो हरे लेन्डुपलाई।
चुपचाप बसिरहन्छ हल्लैहल्लाभित्र; सुनसान भएर। ‘सुन् आमोस! यसलाई नचला, कम्ति बोल्ने माथि पनि खै के भएको छ यसलाई’- सलिम पनि जिस्काउँदै क्लासरुमबाट निस्कियो हरे। लेन्डुपकै कुरा उसैलाई सुनाउँदै छु, अस्ति श्रेयश्रीले भनेको।
‘केटाहरूको स्कूल केटीको कुरा नहुने त कुरै छैन। सायद केटीको स्कुलमा पनि त्यस्तै हन्छ कि!’ लेन्डुप भन्छ।
‘मास्टरमा आको झण्डै एक वर्ष हुन लागेछ। पढाइले गर्दा कसैसँग राम्रो बात भएको छैन। के गर्नु समयले छाडेर गएपछि फेरि ल्याउन आउँदैन।’ बीचैमा बोल्छु- ‘कष्ट त गर्नै पर्‍यो नि, अँ त्यो अस्ति भनेको तिम्रो फस्ट लवको ट्रेजेडी भनन!’
लेन्डुप टोहोलाउँदै भन्छ- ‘एः... छोड्देऊ त्यो, सुकेको गुहु के कोट्ट्याइ रहनु? बरु एसो उयाँ सुदरसनकामा च्या खाऊँ।’ ‘लऽ त्याँबाट भन है!’
चिया पिएर हामी विवेकानन्द छात्रवासको नेपाली ब्ल्गमा पस्यौं। माथिल्लो रेलिङबाट एउटाले सुसु गर्दै रहेछ, छिटा मेरो अनुहारमा पर्‍यो। म, झोँकिएर रट् लिइ कुद्नु आँटेको उसले पक्रेर रूमभित्र तान्यो। एकक्षण त्यहाँ हङ्गामै भयो।
केही शान्त भएपछि लेन्डुपले भन्यो- ‘लु सुन त्यो मेरो फस्ट लव् ट्रेजेडी। तर फेरि ‘आज तक’ हुने होइन है; पहिले नै भन्द्या छु।’
असाध्यै मन पराएँ तापनि भन्न नसकेर उत्तर खोजिरहेको बिहान अफ् क्लासमा केटाहरूको गफ, ‘भ्यालेन्टाइन डे’बारे सुनें। मन पराएका केटीहरूलाई त्यस दिन प्रपोज गर्दा नाइ भन्दैन हरे। अरे वाह! बेकारको गफ पनि कति उपयुक्त। मनमनै सोचें। सायद विकल्प छैन भने जिउन गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई।
अर्को कुरा पनि सुनें मन पराएका केटीलाई धेरै दिन पर्खनु हुँदैन रे...। नत्र अर्काले उँडाइदिइहाल्छ रे...। अनि त हतारको दिमागमा अर्को सुद्धि चल्यो- फरवरी १३ को बेलुका धेरै सोचेँ भोलिको दिन कसरी रमाइलो बनाउने? त्यसबेला मेरामा मोबाइल थिएन अनि उसकै घरमा चियाको निहु गरेर काकाको बैठकमा उसलाई बोलाएँ। ऊ आएपछि झण्डै पाँच मिनटको सुनसान वातावरणलाई मैले तोडिदिएँ- ‘भोलि म तिमीलाई प्रपोज गर्दैछु।’ उसले नमानेरै ल... भनिई। अनि १४ देखि हामी भेट्न थाल्यौं। बातचित गर्न थाल्यौं। समय-समयमा समयको सदुपयोग हुन्थ्यो। अनि एक दिन कञ्चन हलमा ‘तुम बीन’ मुभी पनि हेर्न गएका थियोँ। तर पन्ध अगष्टको दिन मलाई मेरो जन्मदिनको उपहार आघात स्वरूप दिएर उसले आफ्नै बाटो रोजी।
त्यसरी नै दिन बित्दै गए। बाह्रौं क्लासको सेन्टप सकियो। एचएस आयो। सबै आ-आफ्ना लक्ष्यतिर लागे साथै म पनि केही साथिहरूसँग दार्जिलिङ कलेजतिर आएँ। तर पनि मैले उसलाई पर्खिरहेँ। ‘यो गरिबी भनेको पनि कस्तो हो हो! साला एक.. दिन.. कलेजबाट निस्केर उसलाई भेट्ने मौका पनि पाइएन, थुक्का...।’ झोँक्किन्छ पनि उ बीचबीचमा।
म उसलाई कत्ति याद गर्थें। कतै यता आयो कि! भनेर बजारको मोटर स्ट्याण्डमा हेर्ने गर्थें। तर कलेजको तीन वर्ष उसलाई पर्खेर बित्यो। अँहँ...! उ आएन। केही उपाय लागेन। फेरि यहाँ एम ए जोइन गर्न आए। अनि त झन् के यहाँको पढाइले साह्रै व्यस्त भइयो।
एक दिन लाइब्रेरीबाट निस्केर शिवमन्दिरतिर लागें। त्यहाँ दर्पण किनेर पढ्दै गर्दा कालेबुङ दर्पणको पुछारतिर आँखा पर्‍यो–
‘छात्राले घरकै पङ्खामा झुण्डेर आत्महत्या गरी’
हिजो बेलुकी घरमा कोही नभएको बेला दश माईल निवासी हर्कमानकी छोरी प्रणिताले आफ्नै घरको पङ्खामा झुण्डिएर आत्महत्या गरी। घट्ना स्थलमा त्यहाँका पुलिस प्रभारी ओसी सुनिल शर्मा आएर घटना स्थलको जाँच गर्दै शवलाई पोसमर्टमको निम्ति पठाए।
लगभग बेलुकी चार बजीतिर कलेजकी छात्रा प्रणिताको आत्महत्याको खबरले गाउँमा सनसनी फैलियो। आत्महत्याको कारण ...............................
यसरी घटनालाई नस्वीकारिकनै स्वीकार्न पर्‍यो केही दिन अघि आएको खबरले।
ऊ प्रेग्नेन्ट थिएछ!............प्रेग्नेन्ट!!
Posted by Rupesh at 2:44 AM
सा~रे~ ग~ म~ प~ ध ~नि~
नि~ध~प~म~ग~ गाउँको कानसम्म,
गाउँ शब्दको धुन खोजिरहेको छ,
अस्तिदेखि खेतमा मुरली बजाउँदै.. तिरिरि...!
शब्द टुकुलटुकुल हिँड्छ
गाउँकै पन्नामा कलमको मैथुन गर्ने बानीसँग
वाक्क भएर, फेरि शब्द घुमाइ-घुमाइ खेलाइबस्छ
कलमले गाउँको गर्भमा,
यो अर्को पूर्वाग्रह हो
समय चेतनाको कन्तुरमा बन्द भएर
गुम्सिएको ढुँडिको छाला,
शब्दको जरासम्म टाँसिएर
शब्दको धुन गाउँमै अलमलिरहेको छ
मालिङ्गोको एक-एक प्वालबाट
सङ्गीतको नयाँ संस्करण हेर्नलाई!
हरेस खाएपछि, मसिको सहानुभूति पनि
ठर्रा झैँ मातेर कच्याङकच्याङ गरिरहन्छ
तेल हाल्नै नपर्ने उसको
मानसिकतालाईठ्याम लगाएर जान्छ
प्रत्येक दिन हुर्कँदै आउने इच्छाले
टक्साएर राखेको जस्तो-
कहाँ जन्माउन सक्छ
घरिघरि- अरूणा लामा
‘पोहोर साल खुसी फाट्दा, जतन गरी मनले टालेँ
त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टालेँ
यसपालि त मनै फाट्यो, केले सिउने, केले टाल्ने हो!’
(स्वर सामाग्री अरूणा लामाकन: समर्पण)
Posted by Rupesh at 2:33 AM
लोग्नेको मृत्युपछि सानुमति उमेर छँदै विधुवा भई!
बर्खाको झरि, हिउँदको खडेरी र कमानको अस्थिरताले उसलाई वाक्कै बनाइसकेको छ। उसले आफ्ना छोरा र छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन केही अरू व्यवसाय गर्ने निधो गरी।
एक दिन कमानबाट नाम कटाइवरी बजारतिर लागी। बेलुका फर्किँदा अनुहारको उज्यालाले आफ्ना नानीहरू समेत् उज्यालो भए। अब आफ्नो परिवारलाई सुखसँग पालनपोसन गर्ने विचार उसमा पलायो।
दुई वर्ष घरबाट बजार, बजारबाट घर गरेकी थाहै भएन; सानुमतिलाई। खुई! गरेर मोबाइलको क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्न लागी।
दिनदिनै उसले धेरै ठूलो, ठूलो अति ठूलो सपना देख्न थाली। आफ्ना नानीहरूलाई बजारको स्कुलमा पढाउने समेत उसमा आँट आउन थाल्यो। तर फेरि उसलाई एक प्रकारको डर पनि मनमा लागिरहेको छ। ‘अलिक वर्ष विचार गर्नु पर्ला।’ उसले सोची।
गाउँलाई उसको उन्नतिमा धेरै शङ्का लागिसकेको थियो। अनि एकदिन चम्चेले उसको पछि गरेर बजारैसम्म पुगे। सानुमति गाडीबाट उत्रेर सरासर एउटा पसलमा गएर बसी। उसले दिनभरि त्यहीँ बसेरै बिताई। चम्चे पनि छक्क पर्‍यो।
गाउँमा आएर उसले चर्चा गरे। ‘हन कसरी यस्तो हुन्छ ?’- मङ्गलेले झोँक्किँदै भन्यो। मङ्गले पहिले सानुमतिको बिहे हुनुअघि उसका प्रेमी थिए। आज ऊ गाउँको पञ्चायत सदस्य भएको छ।
त्यसरी चियो चर्चा चल्दा-चल्दै एकदिन पेपरमा सानुमति उर्फ गङ्गीको खुलासा खबरले गाउँलेमा उसको ठूलो घात पुग्यो।
Posted by Rupesh at 2:31 AM